Wholesale Samsung S21 Ultra 3D Kupisa Kunokotama Yakadzikama Girazi Screen Muchengeti Mugadziri uye Mutengesi OTAO
Samsung S21 Ultra 3D Heat Kukotama Inopfavisa Girazi Screen Screen Mudziviriri
Yakadzikama Girazi rakakomberedzwa skrini inodzivirira yeSamsung S21 Ultra, 3D yakazara kavha dhizaini inogona kuchengetedza iyo yose kuratidzwa. Yakakwidziridzwa kumucheto glue kwete nyore kubuda, inodzivirira kukwenya uye tsvina kure.
● 3D yakazara kavha dhizaini inopa dziviriro yakakwana.
● Kuiswa kuri nyore pasina Bubbles.
● Super Inonzwisisika neUltrasonic Fingerprint Scanner.
● Kesi ine hushamwari inoenderana neakanyanya brand mobile kesi mumusika.
Ndokumbira utarise kuti 9H mune yakadzikama girazi indasitiri chaizvo inoreva kuomesa kwepenzura, kwete iyo inonyanyo kuzivikanwa Mohs kuomarara (Penzura 9H Kuomarara = Mohs 6H Kuomarara). Batch rimwe nerimwe reOTO girazi rakapfava rinoda kupfuudza yakaoma Japan Mitsubishi 9H penzura mutoro wekuomesa bvunzo.
Saizi Saizi uye Inonzwisisika Kugunzva
Unyanzvi hwakakwana hunogara huchikupa mhedzisiro uye zvakafanana zvinoshandiswa kune yakanaka girazi firimu. Iyo chaiyo yakatemwa nenyanzvi zvinoreva yako yakadzikama girazi screen chengetedzo inopa yakakwana uye izere kufukidza.
Inonzwisisika inoenderana ne 3D Ultra-sonic Sensor
Mhando dzemhando dzeSamsung S10, S20, S21, Note10, uye noti makumi maviri akateedzana ese anoshandisa Qualcomm's ultrasonic chigunwe chekucherechedzwa, icho chinovandudza zvakanyanya kuchengetedzeka kwekuvhura. Asi zvakare zvinounza matambudziko makuru kune yakadzikama girazi indasitiri. Parizvino, 95% yeiyo yakadzikama girazi skrini inodzivirira pamusika haigone kutsigira ultrasonic yeminwe yekurekodha uye kuzivikanwa kwazvo. Nekudaro, OTAO yakadzikama girazi skrini inodzivirira yakagadziridzwa zvakanyanya mukugadzikana uye kurongeka kwekuzivikanwa kweminwe kubudikidza nekutsvagisa nekuvandudza uye kusimudzira.
OTAO ese akadzikama girazi chidzitiro anodzivirira kana firimu inopa kumucheto-kumucheto kukanganisa uye kupwanya kudzivirira. Kazhinji, kana foni yako ichidonha pasi netsaona uye ichirova zvakaoma iyo OTAO yakadzikama girazi screen mudziviriri inodzivirira iyo kubva kupunzika. Nekudaro, foni yako inodonha kubva kune imwe kureba hauzokuvadzwa nezvidimbu zvegirazi.
Pashure: Samsung S21 Plus 2.5D Yakazara Kavha Yakapfava Girazi Screen Screen Dziviriro
Zvadaro: Samsung S21Ultra 3D Yakazara Glue Yakadzora Girazi Screen Dziviriro